SP-L29 Soicare iri kure kudzora 300ml smart kumba kwakakosha mafuta bhururu mimhanzi mutauri aromatherapy diffuser, China SP-L29 Soicare kure kudzora 300ml smart imba yakakosha oiri bluetooth mimhanzi mutauri aromatherapy diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
SP-L29 Soicare kure kuzvidzora 300ml akangwara kumba zvinokosha mafuta MAKARALI USB mumhanzi mutauri aromatherapy diffuser
Soicare kure kudzora 300ml akangwara kumba kwakakosha mafuta bhururu mimhanzi mutauri aromatherapy diffuser
· ♫[Makaralı Music Player]Imwe yeanofanirwa-kuva nemapato emhuri. Iyo mimhanzi inoshambadzira yakavakirwa-mukati Yakazvimirira Bluetooth Mutauri. Huwandu hwemhute hwekupfira hunotevera mutinhimira wemumhanzi. Iyo inomhanyisa rwiyo rwemumhanzi, nekukurumidza iyo huwandu hwemhute inochinja. Unogona kutamba mimhanzi inoteedzana uye nemwenje inoshanduka inoshandura, uchigadzira yakasununguka, ine rudo, yakajeka nzvimbo nzvimbo.
· ♫[Remote Kudzora & Nguva]Iyo 300ML inoshambadzira ine ina pfapfaidzo mhute timer modes: 4Min / 60Min / Intermittent / Inoenderera mhute modhi. Iwe unogona kujaira kune sutu ye mhute modhi usati warara uchishandisa mabhatani eiyo diffuser kana remote control. Uye sechiedza chehope, unogona kushandisa remota kudzima / kudzima mwenje wehusiku paunomuka pakati pehusiku, izvo zvinoita kuti hupenyu hwako huve nyore uye hugadzikane.
· ♫[8 Ruvara Kuchinja Chiedza]Iyo yakakosha mafuta diffuser yakashongedzwa neinozorodza 8 -kuchinja-mwenje mwenje mwenje inokurudzira iwe kuti unzwe kugadzikana uye kuzorora husiku. Yakapfava yakajeka mwenje & mhute kudanana uye kubwinya musanganiswa pamwe chete inogadzira inodziya uye yerudo nguva yezuva kana pati. Uye husiku mwenje wekuparadzira unogona zvakare kushandiswa semwenje wemubhedha uye mwenje petafura yeimba yekurara, yekudzidza, kana yebasa.
· ♫[Ultrasonic Air Humidifier]Iyo mweya humidifier inotora ultrasonic mhute tekinoroji, ichichengetedza zvinoshanda zvinoshandiswa zvemafuta akakosha, ichibvumira iwo akakosha maoiri uye mamorekuru emvura akanyungudutswa mumvura kuti aburitswe zvizere mumhepo uye nyore nyore kupinza nemuviri, unovaka ganda uye nekuwedzera hunyoro hwemhepo . Uye humidifier yakanyarara-yakanyarara, unogona kunakidzwa nekurara pasina ruzha.
· ♫[Hutano & Kuchengetedza Hupenyu]Mushure mekuwedzera yakakosha maoiri, iyo inonhuhwirira diffuser inogadzira inozorodza inonakidza kumashure kunhuwirira kune imwe kamuri, iyo inovhara hwema hwezvipfuyo kana kuputa kana imwe yakasviba, kunoderedza kuneta, uye kushushikana kwepfungwa. Iyo yekuparadzira yakavakirwa-mukati isina mvura auto yakavharwa, uye shandisa ngura-inodzivirira PP zvinhu, isiri-chepfu, uye yakanaka magetsi kuputira, iyo inovimbisa kuchengetedzeka kwako iwe nemhuri yako.